Six Sigma Vs. ITIL | Kedu nke ka mma isii ma ọ bụ ITIL? - Ụlọ akwụkwọ nkà na ITS
Kedu ihe bụ ITIL na isii Sigma?
Iche iche n'etiti ITIL na isii Sigma
Ụlọ ọrụ nlekọta ọ bụla gụnyere nkà na ụzụ ọmụma na-achọ ka ọrụ ha na-ezipụta dị elu. Iji jide n'aka njikwa nlekọta nchịkwa, a na-eji usoro abụọ ejikarị ya - Ụlọ Ọrụ Akụrụngwa nke IT (ITIL) na isii Sigma. Ha abụọ nwere ihe ha nwere mmasị. N'ọnọdụ ọ bụla, ọtụtụ òtù dị iche iche na-atụgharị uche iji tinye ha abụọ ọnụ.
Ọ ga-abụ echiche dị mma maka ndị ọkachamara IT iji nweta akwụkwọ ikikere ITIL nke ga-enye nghọta banyere itinye ITIL iji mee ka isii Sigma nweta uru ya. N'agbanyeghi na ha di iche, otu ihe di nkpa banyere ha bu ihe kwesiri ntukwasi obi na iguzosi ike n'ji. Nye anyị ohere ịhụ ha n'ụzọ zuru ezu ebe a.
ITIL bụ usoro e ji eme ihe iji mee ka ọrụ na IT na-ebugharị. Ihe ngosi ITIL nwere ọtụtụ akụkụ. Nchịkwa nchịkwa gụnyere njikwa mgbanwe, njikwa mbipụta, njikwa nchịkwa, njikwa ihe omume na nhazi management. Nchịkwa nchịkwa gụnyere njedebe njedebe, njikwa njikwa, njikwa metụtara ego, nchịkwa nchịkwa bara uru na nchịkwa nchịkwa. Nke ọ bụla n'ime ngalaba ndị a nwere ụfọdụ usoro na omume ndị a pụrụ ịchọta kpamkpam ma ọ bụ nanị.
A na-eji isii Sigma eme ihe n'èzí ọrụ IT maka mgbanwe nke usoro ọrụ. Usoro iwu a na-enyocha ụdị nke dị mkpa maka azụmahịa gị, na-eji usoro iji mee ka usoro ahụ na ihe ndị ha na-eme pụta ma gbanwee ụdị mkpụrụ maka usoro ahụ. Ọ na-ejikọta nke ọma na echiche nke njikwa nchịkwa IT ma na-enye ego maka ego ego. Mbido ụzọ na nkwado nke ndị ahịa bụ ndị isi nke isii Sigma.
N'ọnọdụ nkịtị, ITIL na isii Sigma anaghị ejikọta ọnụ n'echiche. Mee nke ahụ, ha na-eji ya dị ka akụkụ nke ngwakọta dịka ndokwa nke mmemme iji mee ka ụlọ ọrụ nwee oke ogo.
Six Sigma bụ maka akụkụ kachasị oke na nghota, usoro na nchọpụta nke ụdị azụmahịa iji mee ka ha dịkwuo mma. Ọ na-atụkwasị uche na ụzọ kachasị nke ọma iji welie ụdị, azụmahịa ITIL ọzọ na nkwupụta na iwu achọrọ iji chọpụta "ihe" nke usoro.
Usoro ITIL na enyere ndi oru aka ichota ihe kwesiri ime ka ha di nma. N'agbanyeghị ihe a pụrụ ịtụ anya ya, Six Sigma na-enyere ndị ọrụ aka aka ikpebi ihe kpatara nsogbu ma ọ bụ ebe usoro ahụ gbanwere. Ọ n'oge ahụ chọpụta otú a ga-esi edozi nke a. Ọ na-eme ka ndị mmadụ nwee ike ịkọwapụta ọrụ ndị ahụ n'ụzọ doro anya. Ebe ọ bụ na isii Sigma na-eji nyocha nchọpụta, ọ dị mma iji gbalịa ịkwadebe nkwalite na ụlọ ikpe iji chọpụta ma uru ọ ga-eme.
N'ezie, ọbụlagodu na ọdịiche ndị a, usoro abụọ a nke esonyere na-enye ọtụtụ ihe mmasị. ITIL na-ekpebi ihe a ga-eme na nzukọ ọ bụla, ọ bụghị otú. Ya mere, ndị ọkachamara IT na nzukọ ahụ kwesịrị ikpebi usoro mmiri na-eme ma rụọ ọrụ nke ọma n'onwe ha. N'otu aka ahụ, Sig Sigma na-adụ ọdụ otu esi achọpụta ọkwọ ụgbọala kachasị na nsogbu na otu esi edozi ha. Na "ihe" na "esi" nke mgbanwe bara uru, usoro abụọ ahụ na-eme ka ọdịmma nke IT nweta nkwado na nnweta.
A pụrụ iji Sigma isii mee ihe dịka akụkụ nke mgbanwe nke usoro ọrụ ugbu a nke dị ugbu a na-eji usoro ITIL ma ọ bụ na-agagharị na ya. N'elu ohere na ọ bụ na-akpụ akpụ, nzukọ nwere ike iji usoro nke imebi ihe ize ndụ ahụ, chọpụta ihe a ga-eme iji mee usoro ITIL-ọ dị mma na mgbe ejiri ya mee ihe azụmahịa iji mara otú ọ ga-esi kwaga ebe ọzọ. Ọnọdụ ITIL zuru okè.
Dika usoro abuo nke ITIL na isii Sigma bu ihe di nkpa iji mezuo ahia, iga na nkuzi ITIL na isii Sigma ga egosiputa aka. Ndị ọkachamara na-atụkwasị obi na nke a na-enye mmuta ịmụta ihe na isii Sigma iji nye usoro ITIL nke dị na ọnọdụ kwekọrọ n'ebumnobi azụmahịa nke nzukọ ahụ.
Lee kwa: Akara Akara Ọrụ Ohere